Ugaarsadaan iPhone X duulimaadka bartamaha rolalka | Wararka IPhone
Ugaarsadaan iPhone X duulimaadka bartamaha rolalka. Ma waxa dhaca Haddii aad rabto inaad ku duubto mootada mootada dusheeda. Masaafo badan oo dherer ah iyo xawaare wareer leh magacaaga cusub ee iPhone X ayaa baxsada oo duulaya ...
Sida wax walba oo nolosha ah, waa inaad nasiib leedahay. Xaqiiqdii waxaad xusuusataa sawirka wiilka safka saacado u galay inuu noqdo mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee iibsada iPhone-ka cusub, iyo irida hore ee Bakhaarka Apple Store, oo ay diiradda saarayaan kaamirooyin fara badan, oo shucuur ka muuqato, wuxuu furay sanduuqa wejigiisa hoos u dhacayo mobiilkuna dhulka ku dhacay.
Maanta waxaan sharxeynaa waxa ka soo horjeeda. Waa inaad xoogaa taxaddar la'aan noqotaa oo aad dooneysaa inaad ku diiwaangeliso safarkaaga duufaan leh astaanta cusub ee iPhone X. Soojiidashada Shambhala ee Port Aventura ee Salou (Tarragona) waa mid ka mid ah soojiidashada dayrta ee ugu dheer adduunka. Markii la furay 2012, waxay jabisay rikoorro kala duwan, oo ay ku jiraan inuu yahay kan ugu dhaqsaha badan, oo leh xawaare sarreeya 135 km / saacaddii.
Dardargelinta iyo firfircoonida soo food saartay wadada waa naxariisdarro. Xeerarka amniga waxaa ka mid ah inaadan qaadi karin walxaha dabacsan ee la tuuri karo, sida muraayadaha, koofiyadaha, iwm. Kawaran hadaad moobilkaaga gacanta kuxidhid si aad udiyaariso safarka? Hagaag, waxa ugu caansan waa inuu duulo.
Waxa aan caadi ahayn waa taas dalxiis ka yimid gaari gadaal ah, ka soo qaado mobilka la sheegay duulimaadka, sida aan ka arki karno gudaha video. Dukumiintigaan uu soo daabacay dalxiisku laftiisu, waxaa si cad loogu riyaaqay sida uu u arko taleefanka gacanta oo duulaya oo uu soo qaadanayo, isagoo ugu dabaaldegaya si xamaasad leh sidii inuu ahaa kubbadda baseball "Home Run". Sida isagu laftiisu sharaxayo, waxay u noqotay iPhone X rakaab kale oo saarnaa gaadhigii hore, kaas oo u mahadceliyay iyo qaabkee.
Waad ogtahay, haddii aad fuulaysid koronto jaanis ah, ka tag iPhone-gaaga sifiican oo qarsoon. Waxyaabahani waxay dhacaan oo keliya hal mar noloshaada….
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Ugaarsadaan iPhone X duulimaadka bartamaha rolalka
Kiis sameeye ayaa muujinaya iPhone midab "ka duwan" ah